Semalt: Ukuqonda imisebenzi ye-Botnet ngokusebenzisa iBotnet Ukungena
I-Botnets ingenye yeengxaki ezinkulu zezokuphepha kwe-IT ezijongene nabasebenzisi bekhompyutha namhlanje. Amawaka e-botmasters asebenza ngokujikeleza iwashi ukukhusela iinqabiseko zokhuselo eziqulunqwe ngamashishini ezokhuseleko kunye nezinye i-arhente ezichaphazelekayo. Uqoqosho lwe-botnet, kwiinkathazo zalo, lukhula ngokukhawuleza. Kule nkalo, uFrank Abagnale, umphathi we-8 (Semalt weMphathi weNtuthuko yomThengi, angathanda ukukuxelela ngetyala elimangalisayo yi-computer yeCisco.
Kuhlolisiso lwakutshanje ngethimba lophando loKhuseleko lweCisco, kwafunyaniswa ukuba kukho i-botmasters eyenza i-US $ 10,000 ngeveki kwimisebenzi ye-bot - pr9 geri almak. Ngelo hlobo lokukhuthaza abantu abaza kuba nomdla ekufumaneni izandla zabo kulwaphulo-mthetho, iibhiliyoni zabasebenzisa iikhomputha ezingabonakaliyo zisengozini enkulu yeziphumo zokuhlaselwa kwebhokisi - barack obama teleprompter.
Iqela le-Cisco yophando, kwiphando yabo, ijolise ekuqondeni iindlela ezahlukeneyo zobuchwepheshe be-botmasters ezisetyenziselwa ukunciphisa oomatshini. Nazi izinto ezimbalwa ezenzelwe iinzame zabo ukufumana:
Qaphela ingxoxo ye-intanethi ye-intanethi (IRC)
Uninzi lweebhennesi zisebenzisa i-Internet Relay Chat (IRC) njengesikhokelo somyalelo kunye nolawulo. Ikhodi yomthombo ye-IRC ifumaneka lula. Ngaloo ndlela, abatsha abangenamava abasebenzisa i-IRC ukusabalalisa iibhentshi ezilula.
Abasebenzisi abaninzi abangaboniyo bayayiqonda ingozi yokujoyina inethiwekhi yengxoxo, ngokukodwa xa umatshini wabo engakhuselekanga ukuxhaphazwa ngenye indlela yoKhuseleko lokuVimba.
Ukubaluleka kwenkqubo yokufumanisa ukungena
Inkqubo yokufumanisa i-intrusion yinxalenye ebalulekileyo yenethiwekhi. Igcina imbali yezilumkiso kwiziko lolawulo lokhuseleko lwe-intanethi kwaye ivumela ukulungiswa kwenkqubo yecomputer eye yahlaselwa yi-botnet attack. Inkqubo yokufumanisa iyenza umphandi wokhuseleko ukuba azi ukuba ibhentshini yenzani. Kwakhona kunceda ekufumaneni ukuba yiyiphi inkcazelo eye yonakaliswa.
Bonke abaxhasi be-botmasters abangekho iikhompyutheni zekhompyutha
Ngokuchasene nokucingwa kwamaninzi, ukuqhuba i-botnet ayifuni amava ekhompyutheni ephambili okanye ulwazi lolwazi lwekhowudi kunye nokunxibelelana. Kukho abahlaziyi be-botmasters abazi ngokwenene kwimisebenzi yabo, kodwa abanye baxhamla nje. Ngenxa yoko, ezinye i-bots zidalwa ngokugqithiseleyo kunabanye. Kubalulekile ukugcina zombini iintlobo zabahlaseli ngqondweni xa kulungiswa ukukhusela kwintanethi. Kodwa kubo bonke, umququzeleli oyinhloko ufumana imali elula ngomzamo omncinci. Ukuba inethwekhi okanye umatshini uthatha ixesha elide ukudibanisa, u-botmaster uqhubela phambili ekujoliswe kuyo.
Imfundo ibaluleke ekukhuseleni inethiwekhi
Imizamo yokukhuseleko isebenza kuphela kwimfundo yomsebenzisi. Abalawuli beNkqubo bavame ukufaka ii-oshishini ezibonakalayo okanye ukuhambisa i-IPS ukukhusela umatshini ekusebenziseni. Nangona kunjalo, ukuba umsebenzisi akachazi kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo zokuphepha izisongelo zokhuseleko ezifana ne-botnets, ukuphumelela kwanokusetyenziswa kwezixhobo zokukhuseleko zakutshanje.
Umsebenzisi kufuneka ahlale efundiswa ngokuziphatha okukhuselekileyo. Oku kuthetha ukuba ishishini liyakwandisa uhlahlo lwabiwo-mali kwimfundo yomsebenzisi ukuba kuncitshiswe ubunzima bokusingatha amaseva ogaxekile, ukweba kwedatha kunye nezinye izinto ezisongelayo.
I-Botnets ihlala ikhona njenge-oddities kwinethiwekhi. Ukuba izithuthi ukusuka kumnye okanye oomatshini abaninzi kwinethiwekhi zivela kwabanye, umatshini angahlawuliswa. Nge-IPS, kulula ukubona i-botnet, kodwa kubalulekile ukuba umsebenzisi ukwazi ukufumana izilumkiso eziveliswe ziinkqubo zokhuseleko ezifana ne-IPS. Abaphandi bezokhuseleko kufuneka bahlale beqaphile ukujonga oomatshini abelana ngokuziphatha okungaqhelekanga.